फोटो फिचर Archives - Rajmarg Online
फिचर, फोटो फिचर, ब्रेकिङ न्युज, समाचार, समाचार समाज
दाङका नाकाबासीको ! ‘‘हामीलाई थाहा हुनुपर्‍यो हाम्रो भुमि कहाँदेखि सुरु हुन्छ’’ ?
शिवु खनालदाङ, ९ मंसिर। भारतसंग जोडिएको दाङको भैसाहीँनाकाको पूर्वतर्फ रहेको चुरे पहाडमा छसय ७२ नम्बरको सिमा स्तम्भ छ । भैसाहीँनाका देखि पश्चिम सानिमनौरा नाकामा छसय ७३ नम्बर सिमा स्ताम्भ रहेको छ । दाङको अधिकांश सिमा क्षेत्रमा सरदर दुई किलोमिटरको फरकमा सिमा स्तम्भ राखिएको हो । सिमा स्तम्भको आधारमा नेपाली भुमि तर्फ सिधा हेर्ने हो भने नेपाली भुमिमा रहेको अधिकांश नेपाली बस्ती भारत तर्फ जान्छ, राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर ७ भैसाहीँनाका निवासी तिलक क्षेत्रीले भन्नुभयो,–। ‘नेपालको दशगजा नै अन्योलमा छ । ठ्याक्कै हाम्रो भुमि कहाँसम्म हो भन्ने समेत थाहा छैन । भारतले आफ्नो तरिकाले निर्धारण गरेर दशगजा बनाएको छ । बेलाबेलामा भारतीय एस.एस.बिले तिमिहरूले प्रयोग गरेको भुमि पनि भारतको हो भनेर दबाद दिदै आइरहेको छ ।’यता नेपाल भारत सिमा क्षेत्र नजिकै स्थानीय गोपाल खड्का घर पर्छ । घरदेखि करिब ...
24Dec By 288NarayanNo Comments
प्रमुख समाचार, फिचर, फोटो फिचर
गुलियो उखु बेचेर नुनिलो आँशु पिइरहेकाहरू
काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि देशमा राजनीतिक माहोल तातेको छ । पार्टीका झण्डा र ब्यानरसहित कार्यकर्ता सडकमा ओर्लिएका छन् । एकीकरण भएको तीन वर्ष नबित्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभाजनको सँघारमा छ । अचानक फरक मोड लिएको नेपालको राजनीतिमाथि धेरैको चासो छ– अब के हुन्छ ? तर, आफ्नो उखुको भुक्तानी नपाएर भोको पेट सडकमा उत्रिएका उखु किसान यो माहोलबारे बेखबर छन् । उनीहरूलाई एउटै चिन्ता र चासो छ– हाम्रो उखुको पैसा कहिले आउँछ ? चिसो काठमाडौंबाट पोहोर पनि कठ्याग्रिंदो मन लिएर फर्किएका थिए उनीहरू । यसपालि पैसा लिएरै फर्किने आशा मरेको त छैन । सरकारसँग वार्तामा बस्दा झिनो आशा त पलाएको छ तर, पनि ग्यारेन्टी भने छैन । गगनदेव रायलाई देशको घटनाबारे उतिसारो चासो छैन । उनलाई आफ्नै चिन्ता छ– रित्तो हात गाउँ गए घाटको बास हुन्छ । रुन्चे अनुहार लगाउँदै उनी भन्छन्, ‘मेरो कमाइ नपा...
8Nov By Rajmarg OnlineNo Comments
Unknown_news, प्रदेश विषेश, प्रमुख समाचार, फोटो फिचर, ब्रेकिङ न्युज
जीर्ण बन्यो लमही घोराही सडक (फोटो फिचर)
शिवु खनाल दाङको लमही घोराही सडक खण्ड स्थित दायाँबायाँ पुरै खाल्डाखुल्डीले सडक अस्तव्यस्त बनेको छ । कालोपत्रे र आर.सि.सि.ढलान उप्किदा लमही घोराही सडक जीर्ण बन्दै गएको हो । लमही देखि घोराही त्याइस किलोमिटरको दुरी रहेको छ । सडकको दायाँबायाँका नालाहरु भत्किएका छन् । कालोपत्रे र आर.सि.सि.ढलान उप्किदा र सडकमा रहेको धुलोले गर्दा यातायातका सवारीसाधन चलाउन हम्मेहम्मे रहेको छ । ...
7Oct By Rajmarg OnlineNo Comments
प्रदेश विषेश, प्रमुख समाचार, फोटो फिचर, ब्रेकिङ न्युज, स्वास्थ्य
बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको माग गर्दै युथ अफ तुलसीपुरद्वारा प्रदर्शन
तुलसीपुर, २१ असोज। युथ अफ तुलसीपुरले बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको माग गर्दै बुधवार बिहान तुलसीपुरमा प्रदर्शन गरेको छ। तुलसीपुरको एकान्त होटेल चोकवाट सुरु भएको उक्त ¥याली बीरेन्द्र चोकदेखि सितलपुर चोकसम्म पुगेर तुलसीपुर उपमहानगरपालिका अगाडि आएर कोण सभामा परिणत भएको थियो । ‘हिजो निर्मला, आज संझना, भोलि हजुरको कोही …? ’ लेखिएको व्यानरको मुन्तिर बलात्कारीलाई मृत्यु दण्डको व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए । युथ तुलसीपुरका अध्यक्ष वशन्त गिरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमा एडमिन अरुण लहरे, आकाश भण्डारी लगाएले सम्वोधन गरेका थिए ।उनीहरुले बलात्कारीलाई कडा भन्दा कडा कानुन नहुँदासम्म बलात्कारका घटना दोहरी रहने भन्दै मृत्यु दण्डको व्यवस्था गर्न मागपनि गरेका थिए । उपाध्यक्ष निशा कुँवरको स्वागत मनतब्यवाट कार्यक्रम सुरु भएको थियो ।कार्यक्रमपछि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा पुगेर उनीहरुले सोही आसयको ज...
6Oct By Rajmarg OnlineNo Comments
प्रमुख समाचार, फोटो फिचर, मनोरञ्जन
तस्वीरमा जसिताको सुन्दरता
काठमाडौं – कलाकार जसिता गुरुङ थोरै फिल्ममा अभिनय गरेर पनि चर्चामा छिन् । जसिताले ‘लिलिबिली’ र ‘लभ स्टेशन’ मा प्रदीप खड्कासँग अभिनय गरेकी थिइन् । यी फिल्मबाट उनले राम्रो चर्चा कमाइन् । जसिता र धिरज मगरको अभिनय रहने फिल्म ‘आइएम ट्वान्टीवान’ छायांकनका लागि तयारी अवस्थामा छ । कोरोनाका कारण फिल्मको छायांकन रोकिएको छ । लभस्टोरी फिल्ममा जसिताको अभिनय रुचाइएको छ । सामाजिक सञ्जालमा पनि जसिता उत्तिकै सक्रिय रहन्छिन् । हेरौं उनका केही सुन्दर तस्वीरः ...
4Oct By Rajmarg OnlineNo Comments
प्रदेश विषेश, प्रमुख समाचार, फोटो फिचर, विचार
देउखरी क्षेत्रका उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्षसंग लमहीबाट राजमार्ग अनलाइन कर्मि शिवु खनालले गरिएको कुराकानी: रत्नप्रसाल श्रेष्ठ अध्यक्षः देउखुरी उद्योग बाणिज्य संघ लमही वर्षाै देखिको दांगालीबासीहरुको चाहान प्रदेश सरकारले पूरा गरेको छ । यो चाहानासंगै हामीहरूको मात्रै नभएर पश्चिम बेल्टको माग पूरा भएको हो । दाङ राजधानी भयो, यस मानेमा खुसि नहुने त कुरै भएन । प्रदेश सरकारलाई देउखुरी उद्योग बाणिज्य संघ लमहीले के सहयोग गर्नपर्छ, हामी तयारी अवस्थामा छौँ । मात्रै प्रदेश सरकारले हामिसंग सहयोग माग्न प¥यो, जस्तो सकै सहयोगको लागी हामी तयार छाँै । अर्काे कुरा राजधानी दाङमा आएसंगै यस ठाउँको विकास हुनेमा आसा पलाएको छ र विकास पनि हुन आवश्यक छ । लामो संघर्षपछि बल्ल राजधानीले सबैलाई पाएक पर्ने स्थानमा पाएको छ । प्रदेश सरकारले ढिला गरेपनि अहिले आएर दंगालीको मात्रै नभएर सबैलाई सुविधा र न्याचित हु...
22Sep By Rajmarg OnlineNo Comments
प्रदेश विषेश, प्रमुख समाचार, फोटो फिचर, साहित्य/कला
दाङ, ६ असोज। यस क्षेत्रमा सबै भन्दा बढि उपन्यास प्रकाशन गरेर किर्तिमानि कायम गर्नु भएका साहित्यकार एवं पत्रकार सविन प्रियासनको दुईवटा उपन्यास यही असाज दोस्रो साता बजारमा आउने भएको छ । प्रियासनले एयर होस्टेस र लकडाउन लभ नामक नयाँ उपन्यासहरु बजारमा ल्याउन लागि रहनु भएको हो । प्रियासनका यी उपन्यासहरु नवौ र दशौ उपन्यासहरु हुन् । उहाँले यस अगाडी ८ वटा उपन्यास, दुईवटा कथा र अन्य पुस्तक प्रकाशन गरि सक्नु भएको छ । एयर होस्टेस कसरी बन्ने, बनि सकेपछि एयर होस्टेसको भूमिका के हुने, उसले आफ्नो काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी कसरी निर्वाह गर्ने, हवाई यातायातलाई प्रभावकारी बनाउन एयर होस्टेसको भूमिका हे हुनुपर्छ, हुन सक्छ ? भन्ने कुरा उपन्यासको मुख्य विषय वस्तु बनेको उपन्यासकार प्रियासनको भनाइँ छ । यस बाहेक एयर होस्टेस पेशामा आबद्ध व्यक्तिको घरायसी र व्यक्तिगत जीवनसँग जोडिएको कथा पनि यसमा समावेश रहेको प्...
18Sep By Rajmarg OnlineNo Comments
फोटो फिचर, ब्रेकिङ न्युज
नेपालमा चाडै नै संचालनमा आउन थालेका नेपाली रेल (फोटो फिचर सहित )
तस्बिर : रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रको फेसबुकबाट
30Jun By Rajmarg OnlineNo Comments
प्रदेश विषेश, प्रमुख समाचार, फोटो फिचर, ब्रेकिङ न्युज
सलहले सिध्यायो बाली (फोटो)
देउखुरी, असार १६ । दाङको लमहीमा सलह किरा देखापरेको छ । मंगलबार लमही नगरपालिका वडा नम्बर ८ गणेशपुर गाउँमा ठूलो मात्रामा सलह किरा देखा परेको हो । सलह किराले किसानले लगाएको बालीनाली सबै नष्ट पारेको छ । ‘दिउँसो दुई बजेतिर पश्चिमबाट ठूलो संख्यामा हाम्रो गाउँमा सलह किरा आयो । आएको एकैछिनमा सलह किराले मकै, करेला, भिण्डी, बदाम, केरा र धानको ब्याड सबै नष्ट पारेको छ’, स्थानीय टीकाराम चौधरीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘ढाई कठ्ठा जग्गामा लगाएको सबै अन्नबाली सखाप पार्यो । केही पनि बाँकी राखेन । थोरै समयमै धेरै अन्नबाली सखाप पार्दो रहेछ ।’ ...
25Jun By Rajmarg OnlineNo Comments
प्रदेश विषेश, फोटो फिचर, ब्रेकिङ न्युज
दाङ, असार ११ । दाङमा थप १ जना जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। बुधबार राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परिक्षणका क्रममा बंगलाचुली गाउँपालिका–२ का वडा अध्यक्ष र १ जना महिला स्वास्थ्य स्वयम सेविकामा कोरोना संक्रमण देखिएको बंगलाचुली गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख भक्तबहादुर जिसीले जानकारी दिएका छन्। महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविका वडा नम्बर १ निवासी भएपनि वडा नम्बर २ को क्वारेन्टाइनबाट स्वाब संकलन गरिएको थियो। उनीहरूको स्वाब संकलन जेठको २५ गते वडा नम्बर २ को प्रावि बोढिपोखरा क्वारेन्टाइनबाट स्वाब संकलन गरिएको थियो। स्वाब संकलन गरेको १७ दिनपछि रिपोर्ट आज आएको हो। योसँगै दाङमा कोरोना भाइरस संक्रमित हुने जनप्रतिनिधिको संख्या ४ पुगेको छ । यसअघि बंगलाचुली ५ र ६ का वडा सदस्य र घोराही उपमहानगरपालिका–२ का वडा अध्यक्षहरूमा पनि कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। उनीहरू...